Isifundo.ly: Isicelo sokuFunda nokuFunda | Martech Zone
Isifundo.ly: Isicelo sokuFunda nokuFunda
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 13, 2013 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 13, 2013 Douglas Karr
Kukho amaxesha, ngakumbi kubuchwephesha, ofuna ukubonelela ngesifundo esikhawulezayo nesilula kwiqonga lakho. Njengomzekelo, sakhula I-CircuPress njengenkonzo ye-imeyile yokusebenzela ngokwakho yeWordPress… kodwa ifuna amanyathelo ambalwa ukuseta. Sinokwenza ividiyo ebonisa ukuseta, kodwa umsebenzisi uya kuthi emva koko ayeke / aqhubeke njengoko bebukele kwaye beqwalasela iakhawunti yabo. Endaweni yokuba simisele nje Isiseko seCircuPress isifundo kunye Ngokuncinci -Kudityaniswe nekhwizi-ukuqinisekisa ukuba bahamba ngenyawo lasekunene!
Nje ukuba usigqibe isifundo sakho kunye nemibuzo, unikwa ikhadi elilula, elilula:
Ngokuncinci yasekwa ngumhlobo wethu olungileyo, UMax Yoder, usomashishini wasekhaya, imvumi, umfoti wevidiyo… kunye nomfo olungileyo.
Ngokuncinci ivumela abasebenzisi bayo ukuba bakhe izifundo ezintle, ezinophawu kwimizuzu ngaphandle komgca omnye wekhowudi. Unokwabela izifundo zabachaphazelekayo okanye wabelane ngezifundo zakho ngekhonkco. Isifundo.lysizakuphatha izikhumbuzo ukuqinisekisa ukuba izabelo zakho zigqityiwe ngexesha. Iimpawu ze Ngokuncinci ziquka:
izabelo -Yabela izifundo ngasese okanye usasaze ikhonkco eluntwini, ukubona ukuba ngubani othathe isifundo sakho kwaye nini.
amaqela -Ungabela umntu omnye okanye yenza amaqela ngaphakathi kwesifundo ukwabela nokulawula abathathi-nxaxheba bakho.
kwakha -Bona ukuba abasebenzisi bakho bafunde kakuhle kangakanani izinto zakho kwimibuzo emininzi ekhethiweyo.
Inkxaso yemifanekiso nevidiyo -Faka ngokulula imifanekiso okanye ividiyo kwizifundo zakho.
Uhlalutyo kunye neNgxelo - Ngokuncinci igcina iirekhodi zoqeqesho lwabachaphazelekayo kunye nembali yemfundo- ukusuka kwindlela abayiphendule ngayo imibuzo ethile ukuya ngqo kuluphi ixesha kunye nexesha abalugqibe ngalo uqeqesho olunyanzelekileyo kunye nokuzikhethela.
ukuthobela - Ngokuncinci zilanda umkhondo iidilesi ze-IP zokuthobela umthetho.
tags: nokufundausetyenziso lokufundausetyenziso lwesifundongesifundoizifundoImibuzoukufundisausetyenziso lokufundisa
Ukuboniswa kwemigca yesihloko se-imeyile
Distimo: Uhlalutyo losetyenziso, ukuGuqula kunye nokuKhangelwa kweVenkile ye App